गौतमवुद्ध विमानस्थलः हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर कहाँ अड्क्यो ? (तस्वीरहरू) – Nepal Press
गौतमवुद्ध विमानस्थलः हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर कहाँ अड्क्यो ? (तस्वीरहरू)
२०७८ वैशाख ५ गते १७:०३
काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतमवुद्ध विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर अड्किएको छ । ४ प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहँदा कोभिडका कारण काम अड्किएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमवुद्ध विमानस्थलमा निर्माणको मुख्य काम सम्पन्न भइसकेको आयोजक प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष कोभिड देखा नपरेको भए अहिलेसम्म विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्ने थियो । तर, कोभिडका कारण आफ्नो देश फर्किएका प्राविधिक आउन ढिलाइ हुँदा निर्माणको अन्तिम समयमा काम प्रभावित बन्यो ।
‘विमानस्थलका मुख्य सबै काम सकिएका छन् । भौतिकतर्फ ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । अब बाँकी रहेको काम भनेको टर्मिनल विल्डिङ, उपकरण जडान, फिनिसिङ र फर्निचरको हो,’ उनले भने ‘प्राविधिक हुने हो भने दुई महिनाभित्रमा नै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने थियो ।’
अधिकारीका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ, अमेरिकी र थाइल्याण्डका प्राविधिक थिए । तर, गत वर्ष कोभिड फैलिएसँगै सबै प्राविधिक घर फर्किए । कोभिडका कारण चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले ३५ जना प्राविधिक पठाउन नसक्दा त्यसका ठाउँमा भारतीय प्राविधिक ल्याएर उपकरण जडान गरियो । अहिले विमानस्थलमा रन-वे, ब्यागेज ह्यान्डलिङ र कन्भर बेल्टको उपकरण जडानको काम भइरहेको छ ।
आईसीबी जिरो टू अन्तर्गतको सर्भिलेन्स जडानको काम चाहिँ लकडाउनमा घर फर्किएका अमेरिकाकी प्राविधिहरुले आएर गरिसकेका छन् ।
आएनन् थाई प्राविधिक
विमानस्थल निर्माणको मुख्य काम सकिए पनि थाइल्याण्डका प्राविधिक नआएकाले अन्य उपकरणको काम रोकिएको अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार थाइल्याइण्डबाट आउने टिम आएको छैन । उनीहरुको ठाउँमा अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट प्राविधिक झिकाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, कोरोनाका कारण उनीहरु पनि नेपाल आउन मानिरहेका छैनन् ।
थाइल्याण्डका प्राविधिकले आफूहरूलाई थाइ सरकारले नेपाल आउन रोकेको बताइरहेका छन् ।
अधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि हामीले कूटनीतिक च्यानलबाट कुरा अगाडि बढाएका छौं । तर, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा धेरै कुरा पनि गर्न नसकिदो रहेछ ।’
प्राविधिक काम भएकाले त्यसलाई आफैंले सम्पन्न गर्नसक्ने क्षमता आफूहरुसँग नभएको उनले बताए । भारतमा कोभिड दिनानुदिन बढेकाले पनि नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा पनि परेको उनको भनाइ छ ।
उडानका लागि विमान कम्पनीसँग छलफल हुँदै
विमानस्थल कहिलेसम्ममा सञ्चालनमा आउँछ भन्ने एकिन भइसकेको छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वतयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपूर्व नै उडानका लागि स्वदेशी र विदेशी हवाई कम्पनीसँग सरकारी स्तरबाट नै छलफल भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार गौतम वुद्ध विमानस्थल वुद्धको जन्मस्थलमा भएकाले यहाँ धार्मिक पर्यटन आउने आशा राखिएको छ ।
‘जापान, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, म्यानमार, चीन आदि मुलुकबाट धार्मिक पर्यटक लुम्बिनी आउने छन्,’पोख्रलले भने, ‘यहाँ पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विश्वास लिएका छौं । साथै नेपालको तराई क्षेत्रबाट खाडी मुलुक जाने कामदारहरु काठमाडौं नआइकन गौतम वुद्ध विमानस्थलबाट सिधै जान सक्छन् ।’
वोइङ र एयर बस जहाज उडान हुने
वोइङ ७७०-२०० र एयर वस ३३०-३०० सम्मका जहाज अवतरण गर्न मिल्ने गरी यो विमानस्थल निर्माण गरिएको छ । दीगो पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यकासाथ नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइएको हो । एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा बनिरहेको यो विमानस्थलमा ३ हजार मिटरको रन वे रहेको छ ।
विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेशन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जिर्णोद्दार, ट्याक्सी वे, धावन मार्गलगायत बनिरहेका छन् ।
यो विमानस्थलको लागत कूल ८ करोड ५५ लाख डलरे रहेको छ । प्राविधिक कारणले चिनीयाँ कम्पनीसँग आईसीबी-१ का लागि ७ करोड ८३ लाख डलरमा सन् २०१४ नोभेम्बर १३ मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१७ मा यसको निर्माण शुरुवात भएको थियो । कोभिडको दोस्रो लहरले विमानस्थल सञ्चालन अवधिलाई अझ लम्व्याउन सक्ने बताउँछन् प्रमुख अधिकारी ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ५ गते १७:०३
टुँडिखेलमा नेपाली सेनाको फूलपाती बढाइँ (तस्विर र भिडिओ)
दसैँ मनाउन घर फर्कनेको भीड (तस्बिरहरू)
दश तस्बिरमा हेर्नूस् पदभार ग्रहण गर्दा देखिएको झाँक्रीको उन्मुक्त हाँसो
सीमानाकामा दसैं मान्न गाउँ फर्कनेको लर्को (तस्बिरहरु)
ओलीसँग खिच्न नपाएको पोज नेताहरूसँग, जसलाई धेरै प्रतिनिधिले घेरे (तस्बिरहरू)